Corporate social responsibility as a tool to accelerate the achievement of development goals in Zimbabwe
Nyawuyanga, Tafadzwa Maggie (University of the Western Cape, 2015)
The aim of this study is to critically analyse corporate social responsibility as a tool to accelerate the achievement of development goals in Zimbabwe. The main question is how CSR can be used to speed up the achievement ...
Compliance with international standards on compensation for occupational injuries and diseases by Zimbabwe and South Africa
Zvidzayi, Tapiwanashe (University of the Western Cape, 2015)
This mini thesis provides a comparative study on two Member States of the ILO. These are, namely: South Africa and Zimbabwe. The purpose of this research is to find out whether Zimbabwe and South Africa are complying with ...
To what extent does Zimbabwe comply with its international obligations for the protection of unaccompanied and separated refugee children?
Mutsvara, Sheena (University of the Western Cape, 2015)
This study set out to analyse Zimbabwe’s obligations under international law for the protection of UARC. Chapter one was an introduction to the study laying out the background of refugee and child protection. The background ...
Corporate governance failures in state-owned enterprises in Zimbabwe : an assessment of the strengths and weaknesses of the corporate governance structure
Madekutsikwa, Kennedy (University of the Western Cape, 2015)
Corporate governance failures have been rampant in Zimbabwe’s state owned enterprises and it is necessary to assess if the measures in place are adequate to address the situation at hand. In-order to respond to the above, ...
AuthorMadekutsikwa, Kennedy (1)Mutsvara, Sheena (1)Nyawuyanga, Tafadzwa Maggie (1)Zvidzayi, Tapiwanashe (1)Subject
Asylum seeker (1)Children (1)Compensation (1)Corporate governance (1)Corporate social responsibility (1)International Labour Organisation (1)International protection (1)International Standards (1)Maternal health (1)... View MoreDate Issued